Inkolelo ye-Attribution | Martech Zone
NgoMvulo, Februwari 15, 2016 Douglas Karr
Esinye sezilayidi endithetha ngaso phantse kuyo yonke incoko endinayo namashishini yile ndiyibiza ngokuba yi intsomi yokunikwa. Kuyo nayiphi na inkqubo yokulinganisa, sikhetha imithetho yokuziphatha kunye neyokuziphatha. Ukuba oku, emva koko. Ingxaki, nangona kunjalo, kuba ayisiyo indlela ezenziwa ngayo izigqibo zokuthenga. Ayinamsebenzi ukuba ungumthengi okanye ukuba lishishini- ayisiyiyo nyani ye uhambo lwabathengi.
Inqaku elibonisiweyo kukuthenga kwam Amazon Echo. Ndayibona i-buzz ekwi-intanethi xa yayiqala ukumiliselwa, kodwa ke bendingenaso isidingo sayo. Ngelo xesha, nam ndandingenguye oyena msebenzisi uphambili. Kodwa njengoko ndandihambisa ngakumbi nangakumbi kuthengiso lwethu lweshishini kwiAmazon, ndajoyina iNkulumbuso, kwaye ndafumana ukuthunyelwa kungaphelanga usuku, imeko yam yeAmazon yatshintsha.
Bendingazi kangako malunga Amazon Echo, nangona. Ngenye imini kuFacebook, UMark Schaefer wenze amagqabantshintshi anomdla. Utshilo ukuba wayethetha neAmazon Echo yakhe ngakumbi nangakumbi ngathi ibingumntu osegumbini. Njengobuchwephesha bobuchwephesha kunye nomthandi weAmazon, bendinomdla.
Ngokobuchwephesha, ndingatsho ukuba yayikukuchukumisa kokuqala kohambo lwam lwabathengi. Ndisukile kuFacebook ndaya eAmazon apho ndafunda iphepha lemveliso. Yayikhangeleka intle kakhulu kodwa andikwazi ukuzithethelela ngendleko ngelo xesha. Ndaye ndaya kwi-Youtube ukuze ndibone ukuba zeziphi izinto ezipholileyo ezazisenziwa ngabantu ngaphandle kwento yokuthengisa.
Ndibuyele eAmazon ndafunda uphononongo lwenkwenkwezi e-1 kwaye khange ndibone nantoni na enokundithintela ekuthengeni isixhobo… ngaphandle okanye kwixabiso. Andikwazi ukuthethelela into yokudlala entsha ngelo xesha.
Ukugqibela kweTouch Attribution
Kwiveki ezayo okanye xa ndihambahamba kwiwebhu, ezinye iintengiso zentengiso kwakhona ze Amazon Echo kwavela. Ekugqibeleni ndoyisiwe yenye yeentengiso ndathenga isixhobo. Ndingabhala imihlathi embalwa malunga nokuba ndiyithanda kangakanani, kodwa ayisiyiyo injongo yale post.
Injongo yale posi kukuxoxa apho ukuthengiswa kweAmazon Echo kuya kubalelwa khona. Ukuba kukuchukumisa okokuqala, kuya kubalelwa kuMarko njengempembelelo… nangona engenguye umphembeleli wezixhobo kunye netekhnoloji. Ndingatsho ukuba uluvo lukaMarko malunga ne-Echo lwalunentshukumo yokwazisa kuhambo lwam lwabathengi. Akukho ndawo phambi kokuba uMarko athethe ngayo ndandisazi ngobuqhetseba be-Echo kunye neempawu ezahlukeneyo.
Ukuba imodeli yokunikezelwa kukuchukumisa okokugqibela, intengiso ehlawulelweyo kunye nentengiso kwakhona iya kuba ngumthombo wentengiso. Kodwa ngokwenene babengekho. Ukuba undibuza ukuba leliphi iqhinga lokuthengisa eliqinisekileyo ukuba ndithenge i-Echo, ndiza kuphendula:
Kwakungekho nanye Isicwangciso esinye lonto indenze ndathenga i-Echo, ibiyiyo yonke. Kwakungokuphawula kukaMarko, yayikukukhangela iividiyo ezenziwe ngumsebenzisi, yayiluphononongo lwam lokujonga kakubi, kwaye yayiyintengiso yokumaketha kwakhona. Ingena njani loo nto kwifaneli yokuguqula kaGoogle? Ayenzi… njengoko kungahambi kakhulu kuhambo lwabathengi.
Ndibhalile malunga Isikhalazo esiyintloko sentengiso kunye negalelo sisitshixo.
Kukho enye indlela kodwa intsonkothe. Ukuqikelela kubahlalutyi inokujonga indlela yokuziphatha yokuthengisa kuwo onke amajelo kunye neendlela kwaye njengoko usenza uhlengahlengiso, inokuqala ukudibanisa imisebenzi efanelekileyo kwintengiso iyonke. Ezi njini zinokuxela kwangaphambili ukuba ukuthoba okanye ukunyusa uhlahlo-lwabiwo mali okanye umsebenzi kwisicwangciso esithile sentengiso uza kuba nefuthe kumgca osezantsi.
Njengoko ujonge kwimizamo yakho yokuthengisa, kunyanzelekile ukuba uqaphele ukuba kwanentengiso engenalo uguquko ngqo inefuthe ngokubanzi kwinkqubo yokwenza izigqibo komthengi. Kwaye ifuthe lingaphaya kwemizamo yethu yokuthengisa-amava onke wethemba anegalelo kuhambo.
Nanku umzekelo olula: Unayo ivenkile kwaye usike abasebenzi bakho bokucoca. Ayisiyo ukuba ivenkile yakho ingcolile, kodwa mhlawumbi ayinamabala njengangaphambili. Isiphumo kukuba ukuthengisa kwakho kuyehla njengoko abathengi abaninzi be-finicky bengaziva ngathi bacocekile njengale venkile yendawo yokuhlala. Uyijonga njani le nto kwiinzame zakho zokuthengisa? Usenokuba ukonyuse inkcitho yakho yentengiso ngeli xesha kodwa ukuthengisa jikelele kuyekile. Akukho nto "icocekileyo" kumgaqo wohlahlo-lwabiwo mali ... kodwa uyazi ukuba inefuthe.
Namhlanje, iinkampani zifuna isiseko somxholo. Ukusuka kwiwebhu ecocekileyo, ephendulayo, ukuya kumanqaku aqhubekayo awakha ukuthembeka, ukusebenzisa iimeko, amaphepha amhlophe kunye ne-infographics. Zonke ezo kwabelwana ngazo, kunye nexabiso elongezwe ngamajelo asekuhlaleni. Zonke zilungiselelwe iinjini zokukhangela. Zonke ezi zinto zinegalelo kwincwadana ye-imeyile ekhulisa ithemba.
Konke kubaluleke kakhulu - akukho nanye othengisa ngayo enye. Unganqwenela ukulinganisela ngokufanelekileyo njengoko ubona ifuthe labo, kodwa akukho namnye onokukhetha kubukho obupheleleyo bokuthengisa kwi-Intanethi.
tags: amazon echoimbekoumnxeba wokuqala wokuchukumisaurhwebo inboundumnxeba wokugqibela wokuchukumisainkolelointsomi yokunikwaUhlalutyo oluqikelelweyoulwandiso lwangaphambili
Ukubiza ixabiso: Ukusebenza kweAmazon kusebenza njani kunye nokuba kuthatha ixesha elingakanani